सौराहामा हात्ती सफारीको विकल्प खोजिँदै – Click Khabar
चितवन – ध्रुव गिरी सौराहामा सपना भिलेज होटल चलाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले हात्ती पाल्न थाल्नुभएको करिब १० वर्ष भयो । शुरुमा हात्ती सफारीका लागि एउटा हात्ती पाल्नुभएका उहाँले अहिले छ वटा पाल्नुभएको छ तर, हात्ती सफारीका लागि प्रयोग हुँदैनन् । किन की हात्ती सबै सफारीका लागि योग्य छैनन् । कुनै हात्ती अपाङ्गता भएका छन् त कुनै अशक्त । यी हात्तीहरू सफारीका क्रममा घाइते भएका हुन् । उहाँले अझै हात्तीको सङ्ख्या बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ।
हात्तीले सफारीको काम नगरे पनि गिरी भने खुशी हुनुहुन्छ । हात्तीका गतिविधि देखाएर नै उहाँले सफारीसरह पैसा भने कमाउन सकेको बताउनुहुन्छ । । दुई वर्षदेखि उहाँले हात्तीलाई सेन्चुरी निर्माण गरी राख्दै आउनुभएको छ । हात्ती नजिकैको बूढीराप्तीमा दिनभर चर्छन्, खोलामा नुहाउँछन् र अरु बेला सेन्चुरीमा बस्छन् ।
सेन्चुरी भनेको हात्तीलाई बिना साङ्लो एउटा घेरामा खुलारुपमा राखिएको ठाउँ हो जहाँ हात्ती पर्यटकका लागि विभिन्न किसिमका खेल, नाच र अन्य रोमाञ्चक गतिविधि देखाउने गर्दछन् । त्योबापत पैसा तिर्छन् । एक हात्तीका लागि मासिक रु ६० हजारदेखि एक लाखसम्म खर्च हुने गर्दछ । यो कामका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उहाँलाई सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छ । हात्ती सङ्कटमा पर्न थालेसँगै यहाँका व्यवसायी चिन्तित पनि छन् ।
युनाइटेट हात्ती सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले ‘एलिफेन्ट सेन्चुरी’ ले व्यावसायिकता र हात्ती संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताउँनुहुन्छ । ‘एलिफेन्ट सेन्चुरी’ भारतको नयाँदिल्लीमा सञ्चालन गरिँदै आइएको उहाँले बताउनुभयो । सौराहामा निजी क्षेत्रका ७० बढी हात्ती छन् । युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था सौराहामा ५५ हात्ती छन् भने अन्य ठूला होटल व्यवसायी मातहतका १५ हात्ती छन् ।
त्रिशुलीमा ट्रक खस्दा तीन जना घाइते !
घर भित्र बसौं महामारीबाट बच्नको लागि सहयोग गरौं !
२०७७, ३२ श्रावण आईतवार0
निति तथा कार्यक्रम र ४अर्ब १५करोडको बजेट पारित
हिरासतको वसाई नयाँ अनुभव : लामिछाने